Yazisa ngelaphu le-melt elinyibilikiweyo
Ilaphu elinyibilikisiweyo (ilaphu elinyibilikisiweyo elingalukwanga) yimveliso eyenziwe nge-index ephezulu ye-melt index ye-PP (i-polypropylene) yengubo engalukwanga. Yeyona nto iphambili kwimaski. Ububanzi be-fiber ye-spinneret inokufikelela kwi-0.001 ukuya kwi-0.005 mm. Zininzi izinto ezingenanto, ulwakhiwo olumanzi, ukumelana nemibimbi, ...
Ungawukhetha njani umatshini omnye wokuthambisa?
Iimveliso zeplastiki zidlala indima ebalulekileyo kwimimandla eyahlukeneyo yemveliso yezolimo kunye nobomi kunye neepropathi zazo ezigqwesileyo ezifana nobunzima bokukhanya, amandla aphezulu, ukumelana nokubola, kunye nokusebenza ngokulula. Nangona kunjalo, ngokusetyenziswa ngokubanzi kweemveliso zeplastiki, ukulahlwa o ...
Ungayikhetha njani ipayipi yocingo lwePVC?
1. Uphawu umphezulu ityhubhu yocingo yombane, ingqalelo nokuba igama lomenzi, imodeli imveliso du, kunye nemigangatho ukuphunyezwa eboniswe kwi bai ityhubhu yocingo iyahambelana, kwaye kananjalo kuthintela iimveliso yomgunyathi dao. 2. Imbonakalo ayonakaliswanga, kwaye akufuneki kubekho crisp, t ...